नरेन्द्र मोदीमाथि नेपालीको फोटो चोरेको आरोप - वीर गोरखा
Home / nepal / Nepali News / slider / नेपाल / नेपाली भाषा / नरेन्द्र मोदीमाथि नेपालीको फोटो चोरेको आरोप
नरेन्द्र मोदीमाथि नेपालीको फोटो चोरेको आरोप
दीपक राई Friday, October 24, 2014 nepal, Nepali News, slider, नेपाल, नेपाली भाषा
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि एक नेपाली फोटोग्राफरको तस्वीर चोरेको आरोप लागेको छ। अमेरिकामा बस्ने गैर अावासासीय नेपाली विमल नेपालले आफ्नो फेसबुकमा राखेको दिपावलीको फोटो भारतीय प्रधानीमन्त्री मोदीको फेसबुकमा प्रयोग भएपछि प्रतिलिपि अधिकारको प्रकरण भारत र अमेरिकामा चर्किएको छ। बिमलले गत साल अाफ्नै निवासमा भएको दीपावलीको तस्वीर भन्दै फेसबुक वालमा तस्वीर पोष्ट गरेका थिए। जसमा अंग्रेजीमा ‘दिवाली लाइट्स इन आवर होम, क्याम्ब्रिज एमए’ लेखिएको छ। तस्वीरमा काठको भुँइमा राखिएका दीयोहरुमा चहकिलो वत्ती बलीरहेको सुन्दर दृष्य छ। सोही तस्वीर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘धनतेरसको शुभकामना’ भन्दै प्रयोग गरेको नेपालको दावी छ । फोटोमा कालो दृष्यमा एस आकारमा द्धीप प्रज्वलित भएको देखिन्छ।
मोदीले पोष्ट गरेको सो फोटोको माथि हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा ‘धनतेरसको पावन अवसरमा सबै देशवासीलाई शुभकामना, यो पर्वले तपाइहरुको जीवनमा सुख, सम्बृद्धि र सुस्वास्थ्य लिएर आवोस्’ भनेका छन्। लगत्तै विमल नेपालले आफ्नो फेसबुक पेजमा नरेन्द्र मोदीलाई समेत मेन्सन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो फोटो बिना अनुमति र प्रतिलिपि अधिकारको वास्ता नगरी प्रयोग गरेको बताए। ‘त्यहाँ फोटोग्राफरलाई किन क्रेडिट दिइएन ? कपिराइट इस्युमा जाँदा के होला, मोदीले फोटो प्रयोग गर्नुअघि सल्लाह वा अनुमति किन लिएनन् ? नेपालले प्रश्न उठाएका छन्। कसैको बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दा उसको अनुमति लिनुपर्ने प्राबधान छ। तर, मोदीले अनुमति लिनु त परै जाओस् तस्वीर खिच्ने बिमलको नामसमेत उल्लेख नगरेपछि यो मुद्दाले अहिले भारतीय मिडियामा स्थान पाएको छ। भारतको चर्चित दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले बिमलले खिचेको तस्वीर र मोदीले शुभकामनामा प्रयोग गरेको तस्वीर तुलना गर्दै समाचार छापेको छ ।
उनले त्यो फोटो अमेरिकाको क्याम्ब्रिज म्यासाच्युसेट्सस्थित आफ्नो निवासको डाइनिङ रुममा अघिल्लो वर्ष दिपावली गर्दा छोरी अविनाको सहयोगमा खिचेको हिन्दूस्तान टाइम्सलाई बताएका छन्। ‘त्यो फोटो मैले लिएको हुँ, मेटाडाटाको प्रयोगबाट केही फ्लिकर थपेर मोदीले आफ्नो फेसबुकमा राखेका हुन्,’ नेपालले भनेका छन्। उनले यसलाई अमेरिकाको प्रतिलिपि सम्बन्धी कानुनले संरक्षण गरेको बताएका छन्। विमल नेपालले आफूलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको ठूलो फ्यानका रुपमा प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्-‘तर प्रधानमन्त्री मोदीले जसरी मेरो फोटोलाई प्रयोग गरेर फोटो क्रेडिट दिएनन् त्यो पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ।’ उनले आफूले यस प्रकरणमा अमेरिकी कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति र उचित क्रेडिट खोजी गरिरहेको बताएका छन् । मोदीले त्यो फोटोमा आफ्नो नाम नराखी प्रयोग गरेकोमा उनको मुख्य आपत्ति हो । उनको यो मागलाई सामाजिक सन्जालमा धेरैले साथ दिएका छन्। नेपाललाई सामाजिक सन्जालमा धेरैले यो विषयलाई मोदीको कार्यालयसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन्।